चन्द्रमामा पहिलो पटक पाइला टेक्ने मानव को हुन् ? - Nayabulanda.com
नयाँ बुलन्द १० मंसिर २०७५, सोमबार १०:३८ 234 पटक हेरिएको
मस्को : सामान्यज्ञान तथा हाजिरीजवाफमा प्रायः सोधिने प्रश्न हो– चन्द्रमामा पहिलो पटक पाइला टेक्ने मानव को हुन् ?
त्यस्तै चन्द्रमामा लिइएको भनिएको तस्वीरमा तारा नदेखिनु पनि अनौठो मानिएको छ । भनिन्छ, उक्त ऐतिहासिक मिशनको ‘ब्लू प्रिन्ट’ आजसम्म किन कसैले आफूले देखेको दावी गर्न सक्दैनन् ? अमेरिकाले भने उक्त दस्तावेज हराएको जिकिर गर्दै आएको छ ।